Sina SEBIC 26 mirefy malaza amin'ny fomba fanatanjahan-tena an-dàlam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ary mpanamboatra | Funncycle
Laharana maodely BEF-ID26RF
filanjana 26 * 2.125 ″ firaka aliminioma 6061, lasina TIG
Fork fampiatoana 26 * 2.0 ″, firaka + firaka
kodiarana INNOVA 26 * 2.125 ″ A / V Mainty
Miaina bisikileta amin'ny fomba vaovao amin'ny alàlan'ny bisikileta elektrika 26 m amin'ny Black. Ity bisikileta mitondra haingam-pandeha 7 hafainganam-pandeha ity dia manana endriny aliminioma ary ity mitaingina malama ity dia hahatonga anao any amin'izay tianao aleha mora foana. Izy io koa dia manana freins disk aloha sy aoriana. Ity e-bisikileta ity dia miaraka amin'ny bateria (capacité 13Ah) sy charger. Amin'ny alàlan'ny fampiratiana LED dia azonao atao ny misafidy ny hafainganam-pandeha mahasoa ho anao amin'ny maody fanampiana telo. Mahaiza mivezivezy amin'ny fanirian'ny fonao raha mbola tonga any amin'izay tokony halehanao haingana faingana miaraka amin'ny motera 48v 500 watt! Ity e-bisikileta ity dia mety indrindra amin'ny fanaovana ny dianao maraina na ny bisikileta fialam-boly tsotra kokoa sy miala sasatra. Tsy tery intsony ny mitaingina lavitra rehefa manana bisikileta elektrika 26 metatra ianao. Ity bisikileta mandeha herinaratra ity dia hahatonga anao hitodika any am-pandehanana tsara.
Mpanjifa: Tiako ny toerana ipetrahana satria tsy mijaly amin'ny fanaintainan'ny lamosina aho noho ny fisian'ny fametrahana toerana diso. Tena tsara tarehy, malama, ary ny endriny tonga lafatra fotsiny. Tiako ihany koa fa toa miavaka izy io raha ampitahaina amin'ny bisikileta elektrika hafa. Mendrika ny bateria, ary haingana ny famahana. Toa milay sy azo ekena ilay lasely. Novidiko ho ahy sy ny vadiko ny roa tamin'ireo bisikileta mba hahafahanay mitaingina efatra ambin'ny folo kilaometatra miala ny trano mankany amin'ny morontsiraka miverina sy mankafy ny rivotra. Tiako ilay bisikileta ary nitaingina azy farafahakeliny indroa isan-kerinandro.
Teo aloha: SEBIC 700c kapila mivezivezy kilasika eraky ny tanàna ebike
Manaraka: SEBIC 26 mirefy tendrombohitra matavy tiresnow moron-tsambo fiara mpitondra herinaratra bisikileta